DAAWO VIDEO:Dagaalkii Ugu Xumaa Aduunka Soo Mara Diyaarado Drones oo Ka Socda Libya. - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO:Dagaalkii Ugu Xumaa Aduunka Soo Mara Diyaarado Drones oo Ka Socda Libya.
In kasta oo diyaaradaha dagaalka ee duullimaadka ah la adeegsaday, inta badan dagaalka cirka waxaa la dagaallamaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn (UAVs) ama drones. Iyada oo ku dhawaad ​​1,000 duqeymo xagga cirka ah ay fuliyeen Diyaaradaha Duuliyaha Lahayn Bishani Kaliya.
Wakiilka Gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee Libya Ghassan Salame wuxuu ku tilmaamay iskahorimaadka ” dagaalkii ugu weyn ee diyaaradaha aan duuliyaha laheyn adduunka “.
Droneska waa u faa’iido badan Dhianacyada dhowr arimood awgood.
Kaliya maahan inay bixiyaan macluumaad qiimo leh oo ku saabsan cadowga oo laga Arki karo meel fog, laakiin waxay awoodaan inay weeraraan bartilmaameedyada isla markiiba iyagoo leh heer aad u sareeya.
Hadii Ay Dhacdo In lasoo Diro Drones Maaha Mid Dhibaato Ah ,Duuliyana Malaha kaliya Diyaarad kale oo Badalaysa Ayaa halka Loo Dirayaa.
Guusha hore ee GNA
Imaatinka diyaaradaha Shiinaha ee Wing Loong drones sanadkii 2016 ayaa isbedel weyn ku yeeshay awoodaha milatari ee LNA.
diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa saameyn weyn ku yeeshay natiijada ciidammada daacada u ah Haftar .
Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Shiinaha laga sameeyay – oo ay ku shaqeeyaan duuliyayaal ka socda Imaaraadka Carabta (UAE) kana soo duulay garoonka diyaaradaha Al Khadim ee bariga – waxay leeyihiin duulimaad dagaal ah oo gaaraya 1,500km (932 mayl), taasoo la micno ah inay keeni karaan gantaallo si toos ah loo hago iyo bambooyinka, garaacista meel kasta oo dalka ka mid ah.
Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa loo adeegsaday inay saameyn weyn ku yeeshaan dagaalka Tripoli, kaas oo General Haftar uu ku dhawaaqay bishii Abriil 2019 ee ka dhanka ah GNA.
Ciidamada dowladda ayaa si isdaba joog ah loogu riixay jeebka adag maadaama caasimada ay hareereeyeen LNA.
Waxaa hadda jiray shaki ah in GNA-ga ay aqoonsatay Qaramada Midoobay, oo uu hoggaaminayo Raiisel Wasaare Fayez al-Serraj, uu sii socon karo muddo dheer, in kasta oo taageero laga helayo Talyaaniga iyo Qatar.
Taasi waxay dhamaan isbedeshay bishii Diseembar 2019 markii Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu xaqiijiyay in Turkey ay si weyn u kordhin doonto taageerada militari ee ay siiso al-Serraj iyo GNA.
Iyaga oo ay wehelinayaan ciidamada, Erdogan wuxuu diray drones oo uu Turkigu sameeyay, kaas oo ah Bayraktar TB2.
Diyaarad Ka yar oo ka gaaban kana tayo wanaagsan Diyaaradaha Shiinaha ee Wing Loong, Bayraktar waxay awood u leeyahay inay Burburiso bartilmaameedka dhulka haftar, Iyadoo Goynaysa khadadka sahaydiisa Hafter, iyo inuu weeraro saldhigyada hawada .
Diyaaradaha oo Ay Weheliso gantaalada Hawk, iyo nidaamyada kale ee difaaca hawada, ayaa macnaheedu yahay in garoonka weyn ee GNA ee Tripoli uu hadda shaqeyn karo isagoon ka baqayn in La Weeraro,Kadib Markii Turkiga Xidhay Difaaca Cirka.
Saamaynta ayaa noqotay mid si lama filaan ah u dhacday markii ciidamada GNA ay bilaabeen howlgalo kadis ah, waxaana duqeymo hilaac ah ay qabsadeen magaalooyin xeebeedka Surman, Sabratah iyo Al-Ajaylat iyo magaalada xuduuda la leh ee Al-Assah.
Tan waxaa ku xigay weeraro isdaba joog ah oo lagu qaaday garoonka diyaaradaha Al-Watiya, oo ay ciidamada Haftar u adeegsanayeen bartilmaamedkooda ugu weyn ee hawlgallada.
taasoo dhabar jab weyn ku Noqotay, himilooyinkii Haftar ee galbeedka Liibiya maadaama aysan ahayn oo keliya xarunta dhexe ee LNA-ga ee halkaas ku taal, waxay kaloo ahayd xaruntiisa saadka Aduunka Uga Dajin Jirey.
Cutubyada LNA ayaa lagu qasbay inay dib uga gurtaan, gaar ahaan markii ay sameeyeen ruushka, oo ay keentay UAE, cutubyada difaaca hawada ee Pantsir S-1 ayaa si weyn loo burburiyey, taasoo ka dhigtay ciidamadii baxsadka inay wax yar ka ilaaliyaan weerarada cirka. Warbixinta warbaahinta ayaa sheegtey in qalabka casaanka ah ee turkiga uu mas’uul ka ahaa baahinta shucaaca Pantsir, taas oo u nugul weerarada cirka ee diyaaradaha Dronka Bayraktar.
Horumarro dheeri ah oo laga sameeyay koonfurta iyo bariga Tripoli ayaa si weyn u Quusiyey qabsashadii Haftar ee caasimada, iyadoo xoogag daacad u ah isaga lagu qasbay inay dib u gurtaan. Boqolaal calooshood u shaqeystayaal ah qandaraaslaha militariga Ruushka ee Wagner Group ayaa laga daadgureeyay gegada diyaaradaha ee Bani Walid.
Kadib Jabkaasi Culus ee Haftar Ku Dhacay , Taliska Mareykanka Afrika wuxuu sheegay in diyaaradaha dagaalka Ruushka ay ka duuleen ,Saldhiga Ugu Weyn Ruushka Siiriya ee Khmeimin ayna ku sii jeedeen Jufra, oo ku taal bartamaha Liibiya.
si loo xoojiyo ciidamada Haftar iyo xulafadooda. Multirole MiG-29s iyo laba dagaalyahan oo Sukhoi Su-24 ayaa loo diray iyagoo wata raaco ay wataan ugu yaraan labo Su-35 oo ah jDiyaaradaha Jiilka 5-Aad ee dagaalka, taas oo calaamad cad u ah Turkiga iyo GNA in guuldaradii Haftar ay tahay kaliya inay aadaan.
Falcelinta Mareykanka ee arrintan ayaa caddaysay – soo saarista sawirrada dayax gacmeedka ayaa muujinaya walaaca ay ka qabaan.
Halista ka imaan karta ayaa ah in Ruushku “qabsado” saldhigyo ku yaal xeebta Liibiya .
In kasta oo awooda hawadu ay marmarka qaar ka beddeli karto xiisadda millateriga, haddana waxaa sidoo kale Liibiya loogu adeegsaday tilmaam heer-halis ah, aalad diblomaasiyadeed, iyo digniin ku saabsan suuraggalnimada in ay sii korodho haddii dhacdooyinka laga tago..
Hadabada Dagaalkani Libya Ayaa Dalalka Sida Tooska Ugu gacan leh Aad U Badan Yahiin,halka Kuwa gadaal Ka tageeraya Aysan Xad Lahayn.
Dalalka waxaa Ka
Mida,Turkiga,Qadar,talyaaniga,Ruushka,Imaraadka,Masar,Urdon,Siiriya,Sucuudiga,Faransiiska,Iyadoo Yurub oo Dhana Ka wal walsan yahiin.
Marka Laga Soo tago Khayraadka Libya ee Loolanka Awoodaha,dalalka Sida Gaarka Uga walwalsan Waxaa Ugu daran Masar Iyo Imaraadka,waxayna Ka Baqayaan In dalkaasi Liibya Xarun u Noqoto Ikhwaanu Muslimin oo tageerayaan Turkiga Iyo Qadar.
Iyagoo Kadib Wal Wal galinaya Dalka Masar oo Laga Tirtiray dalkaasi Colaad Weyna U hayaan Mar uun Inay qabsadaan.